Isanda Kulungiswa, I-Charming, I-Downtown Cottage - I-Airbnb
Isanda Kulungiswa, I-Charming, I-Downtown Cottage
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Gayle
U-Gayle Ungumbungazi ovelele
Leli kotishi elisanda kulungiswa, elibukekayo lilungele ukubaleka ngokuthula noma isonto lakho lokuzijabulisa kwangaphandle. Kungakhathaliseki ukuthi uya ku-zip-lining e-Yellowstone National Park, ujabulela iziphethu ezishisayo e-Bozeman, noma udoba ngendiza e-Livingston, le ndlu yeholide esezingeni eliphezulu iyindawo ekahle yasekhaya phakathi nohambo lwakho.
Leli kotishi likagesi lifakwe ikhishi eligcwele, i-Wifi, i-Direct TV, i-Keurig coffee maker nokunye.
4.87 · 188 okushiwo abanye
Leli kotishi lisendaweni ephakathi komunye wemigwaqo emikhulu yaseWhitehall, ibanga elihamba ngezinyawo ukuya ePepper Tree Deli kanye neCafe, iJefferson Valley Museum, kanye nezindawo ze-rodeo. Uma ungathanda ukubamba imuvi, i-Star Theatre ingaphesheya komgwaqo. Bonke bamukelekile ukubamba iqhaza emicimbini eminingi yomphakathi unyaka wonke njengezimakethe zabalimi, imikhosi yasehlobo, kanye ne-Christmas Stroll yaminyaka yonke.
Indawo yokupaka eyanele iyatholakala, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukuletha imoto ezohlola imisebenzi eminingi yokuzijabulisa yangaphandle efana nokuqwala izintaba, imizila engaphandle komgwaqo, ukugibela amahhashi, iziphethu ezishisayo, ukudoba, i-Lewis neClark Cavers edumile, i-Yellowstone National Park nokunye okuningi.
Umphathi wethu wendawo uhlala ezansi nomgwaqo ukuze kube lula kuwe.
UGayle Ungumbungazi ovelele